Maleeshiyaadka Qubuura Galeenka oo xalay dil fool xun ka geystay degmada Dhuusmareeb. | Halganka Online
Maleeshiyaadka Qubuura Galeenka oo xalay dil fool xun ka geystay degmada Dhuusmareeb.
Posted on Janaayo 30, 2010 by halganka
Maleeshiyada Qubuura Galeenka ee Tigreeda gacan saarka la leh ayaa xalay dil fool xun ka geystay degmada Dhuusamareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud halkaasi oo kamid ah meelaha ay ka joogaan Galgaguud, waxaana ay rasaas la dhaceen gaari dad rakaab iyo xoolo siday.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in xalay gaari xoolo siday ay rasaas oodda kaga qaadeen maleeshiyaadka kadibna uu sasay darawalkii gaariga oo fariin ka waayay, taasi oo keentay haweeney in uu dardaro oo dhismayaal kale bur buriyo iyadoona ugu danbeyn rasaas kale ay dhaawacyo u geystay dadkii saarnaa gaariga ugu danbeyntiina uu istaagay.
Haweeneyda gaariga maray ayaa si xun u dhimatay iyadoona meydkeeda laga qaaday goobtii gaarigu ku maray, iyadoona sido kale dhaawac uu so gaaray mid kamid ah dadkii gaariga la socday kaasi oo hadda lagu dhabiibayo Cusbitaalka magaalada Dhuusamareeb.
Maleeshiyada Qubuura Galeenka ayaa xabsiga dhigay darawalkii gaariga iyagoona ku eedeynaya in uu waxyaabo u siday waxa ay ku sheegeen ”cadowga”, laakin waxaa ay tilmaameen baaritaan in ay ku sameyn doonaan.
Gaariga Xoolaha siday ayaa kusi jeeday magaalada Boosaaso iyadoona uu kaso kicitimay magaalada Baladweyne, waxaana saarna Geel loo beecgeynayay deegaanada Maamulka Bari, xilli waliba halkaasi la marsiin jiray.
« Guutooyinka Shabaabul Mujaahidin oo xalay saqdii dhexe dagaal qorsheysan ku ekeeyay dhamaan xarumaha Maleeshiyada DKMG iyo kuwa AMISOM( Warsaxaafadeed). 2500 Maleeshiyaad ah oo lagu diyaariyay xuduudka Kenya si dagaal ay ugu soo qaadaan Wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. »